Global Voices teny Malagasy » Tonizia: ” Mitaky Fitsarana Mahaleotena ny Vahoaka” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Aogositra 2011 13:38 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika nirinandrea
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Tonizia, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Politika
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofana manokana ataonay momba ny Revolisiona ao Tonizia 2011 .
“Mitaky fitsarana mahaleotena ny vahoaka” io no hevi-dehibe nohindrahindraina tato ho ato teny amin'ny araben'i Tonizia.
Io hetsi-panoherana io dia vokatr'ilay famotsorana ireo minisitra roa avy amin'ny fitondrana teo aloha voarohirohy tamin'ny resaka kolikoly. Ny herinandro lasa teo, navotsotry ny fitsarana ny minisitry ny Fitaterana teo aloha Aberrahim Zouari sy ny minisitry ny fitsarana Bechir Tekkari, izay samy nolazaina fa tsy meloka. Zouari tao aorian'io dia niakatra fitsarana nohadihadiana noho ny raharaha kolikoly hafa.
Hetsi-panoherana tao afovoan-tanànan'i "Tunis" ny 8 Aogositra. "Mitaky fitsarana mahaleotena ny vahoaka", sary nalain'i Nacer Talel nizara io tao amin'ny pejy Facebook-ny.
Ireo minisitra roalahy ireo dia voarohirohy ho nampiasa ny fahefana nanànany ho amn'ny tombontsoany manokana sy hahazoany tombony misimisy kokoa. Maherin'ny enim-bolana taorian'ilay fitakiana, mbola mila manatsara ny endriny ny rafi-pitsarana taorian'ny taona maro nitondrany tena tahaka ny saribakoly teo am-pelatanan'ny fitondrana jadon'ny Filoha naongan'ny Toniziana Zine El Abidine Ben Ali.
Saida Agerbi, olona akaiky an'ilay Filoha naongana, voarohirohy tamin'ny kolikoly sy fitsikilovana ho an'ny fitondrana teo aloha, dia nahazo alalàna ny handao an'i Tonizia koa ho any Parisy, ary tsy nosakanan'ny manampahefana sy ny Seranam-piaramanidina tao Carthage, Tunis.
Fahefam-ptsarana mahaleotena afaka ny hitondra eo anatrehan'ny fitsarana ireo manampahefana teo aloha nanao risoriso, ary ireo tomponandraikitra tamin'ny fahafatesan'ireo mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana no tena fitakiana fototry ny vahoaka ao Tonizia.
Ito lahatsary YouTube ito, nalain'ilay bilaogera Leena Ben Mheni, dia mampiseho ny fivorian'ireo mpanao fihetsiketsehana tao afovoan-tanànan'i Tunis ny 8 Aogositra 2011, ” Ny Demokrasia dia Adidy, Ny Fitakiana Nasionaly dia Adidy”, ary ny hiram-pirenena :
Erik Churchill, Bilaogera Amerikana iray mipetraka ao Tunis dia nanoratra  ny 5 Aogositra :
Nilona be ny mpampanoa lalàna vao nampàkatra fitsarana ireo olona ambony nanodidina an'i Ben Ali. Ny famotsorana ny minisitry ny fitaterana teo aloha ny Alakamisy teo, Aberrahim Zouari, izay voampanga ho nanao kolikoly nandritra ny fotoana lava naha teo amin'ny fitondrana azy, dia nahatonga fahasorenana tamin'ireo mafana fo ao amin'ny aterineto.
Toy ny faniratsirana ny revolisiona no fahitàn'ireo mafana fo izany, porofon'ny tsy fahavitan'ny fanjakana manavao ny lalampanorenana izay misy ifandraisany akaiky amin'ny kolikoly nitranga fony fitondrana teo aloha.
Abderrazak Guirat, bilaogera iray ao amin'ny Nawaat, nanoratra hoe  [ar]:
Ireo mpisolovava maro sy Toniziana an'arivony naneho hevitra, ary nitokona, dia mbola mangataka ny hampàkarana fitsarana ireo izay nandànilany foana ny volam-bahoaka, sy nandoto ny tànany tamin'ny ràn'ireo maritiora, na koa ireo tafiditra amin'ny fanagadràna sy fampijaliana olona tsy manantsiny…Na dia izany aza, anarana maro no voatonotonona tao, nefa tsy misy voahenjika na voaheloka
Ny herinandro lasa teo, nandalo fotoan-tsarotra ny Toniziana. Mifandimby miseho ny vaovao ratsy. Ramatoa Saida Agrbi, vehivavy fantatra fa tamin'ny fanaovany kolikoly sy tamin'ny fiandaniana tamin'i Ben Ali sy ny vadiny[…] Minisitra roa fanta-daza amin'ny heloka nataony tamin'ny vahoaka Toniziana teo ambany fitondran'i Ben Ali no navotsotra […] Naneho hevitra mikasika ireo fivoaran-draharaha mampalahelo ireo ny Toniziana. Fitorevahana kely no nokarakaraina teo anoloan'ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany tao Tunis. Ny mpisolovava sasany nandray fitenenana dia nilaza ny toe-draharaha misy amin'izao fotoana ao amin'ny firenena sy ny ilàna ny fanohizana ny revolisiona. Fihetsiketsehana iray no nokarakaraina androany tao an-drenivohitra ary nilahatra nizotra teo ivelan'ny tranoben'ny fikambanamben'ny mpiasa Toniziana ka hatrany amin'ny Lalàmbe ao Tunis ary nijoro teo anoloan'ny trano fanaovana tantara an-dampihazo ary nihiaka fahafahana.
Ny fitsarana tsy natrehan'i Ben Ali, sy ny vadiny, dia tsy nahafa-po ny olona, koa satria maro no manasokajy ilay fitsarana ho toy ny ” tantara an-dampihazo” raha mbola tsy mahavita ny hanery an'i Arabia Saodita handraoka ny filoha teo aloha sy ny vadiny mipetraka ao Jeddah.
Sora-baventy mivaky hoe "Mitaky fitsarana mahaleotena ny vahoaka. Fanadiovana, Fanadiovana, Fanadiovana, manomboka amin'ny Minisitry ny fitsarana Chebbi. Mandehana miala any!". Sary nalain'i Afef Abrougui tao amin'ny Flickr.
Ny Minisitry ny fitsarana dia nanandrana im-betsaka ny hanao izay handresena lahatra ny vahoaka fa hoe mahaleotena ny fitsarana ao Tonizia ary manao izay ho afany hitazonana ireo izay nangalatra ny volam-bahoaka tamin'ny andron'i Ben Ali, sy ireo tompon'andraikitra tamin'ny famonoana ireo mpanao fihetsiketsehana nandritra ny revolisiona. Izay zavatra tsy naharesy lahatra, na ireo bilaogera, na ireo mpanao fihetsiketsehana
Sarah nanazava hoe  [fr]:
Mbola araka ilay “communiqué (fampitam-baovao)” avy amin'ny Minisitry ny fitsarana ihany, ny fitsarana , toy ireo mpitsara mpanao famotorana, dia efa mahaleotena tanteraka nanomboka ny 14 janoary. Raha izay, dia misy petra-kevitra roa. Na ireo tomponandraikitra amin'ny fikirakirana ireo taratasy ireo tsy mandray ny andraikiny, sy tsy mahomby, ary tokony ho esorina amin'ny toerany, na kosa tena voaloto tanteraka ny fitsarana eto amintsika, ka ny firodanan'ilay fitondrana teo aloha dia hitondra amin'ny firodananà mpitsara, “magistrat”, ary mpisolovava maro. Raha izaho manokana, dia aleoko ilay petra-kevitra faharoa.
Ny hafa misafidy ny hanao sangy zary tenany momba ny fitsarana Toniziana, amin'ny fampitahana azy amin'ny an'i Ejiptiana…..
@The_Fan nibitsika hoe  [ar]:
Vaovao mafàna: Hosni Mubarak, ny zanany, sy ny minisitra dia te ho tsaraina ao Tonizia
Nandritra izany, ireo mponin'ny aterineto ao Tonizia dia nampiasa ny haino amanjery sosialy hiantsoina fihetsiketsehana hafa. Fihetsiketsehana antsoina hoe “Mitaky fitsarana mahaleotena indray ny vahoaka”, no nalefa tao amin'ny Facebook, ary tokony hitranga ny alin'ny sabotsy lasa teo [13 Aogositra ]
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/08/21/21042/
 nanoratra : http://kefteji.wordpress.com/2011/08/05/tunisia-needs-a-truth-commission/
 nanoratra hoe : http://nawaat.org/portail/2011/08/08/%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D8%B0%D9%87/
 nanazava hoe: http://un-oeil-sur-la-planete.blogspot.com/2011/08/jutsice-tunisienne-le-spectre-du-mauve.html?spref=tw
 nibitsika hoe : https://twitter.com/#!/The_Fan/status/99159010598600705